Limshonele osolwa ngokubulalisa udadewabo - Ilanga News
Home Izindaba Limshonele osolwa ngokubulalisa udadewabo
Kuthiwa ubemthathele umshwalense
UNKK Nonhlanhla Mbhele, uMaXolo, (41) oboshwe ngezinsolo zokuthenga inkabi ukuba ibulale udadewabo ngoba efuna imali yomshwalense abemkhave ngawo.
ASHAQEKILE amalungu omndeni wakwaXolo, kwaP, eMlazi kuvela igama lendodakazi yakhona engumama webhantshi ebandleni lama-Afrika mayelana nokufa kwenye yamadodakazi akhona okuthiwa yabulawa yinkabi eyayithengwe ngudadewabo ngoba sekuvuthwe umshwalense ka-R100 000 ayeyikhave ngawo.
UNkk Nonhlanhla Mbhele, uMaXolo (41), ubevele eNkantolo yeMantshi yaseMlazi ngoLwesibili emuva kokuboshwa ngoMgqibelo mayelana necala lokubulawa kukadadewabo alamalana naye, uNkz Zandile Susan Xolo (36), owadutshulwa ngoNtulikazi (July) nyakenye.
ILANGA labika kabanzi nyakenye ngodaba lokudutshulwa kubulawe uNkz Xolo ngababulali abangaziwa esendleleni eya emsebenzini. Wadutshulwa ngentululwane yezinhlamvu ezingaphezu kuka-12, washiywa sekunesiqiniseko sokuthi ufile.
Kulolo daba ILANGA lakhuluma noNkk Mbhele owayekhulumela umndeni njengoba kunguyena omdala kwabo owazwakalisa ukudabuka okuyisimanga ngokubulawa kukadadewabo amchaza njengomuntu owayelungile.
UNkk Mbhele uboshwe nowesilisa esiligodlile igama lakhe ongavelanga enkantolo, okuvele ukuthi ulimale ngesikhathi eboshwa ngamaphoyisa, okusolwa ukuthi ubesebenza naye ukumtholela inkabi ezokwenza umsebenzi wokushaya ikhanda.
Ubhekene namacala amathathu okubulala, okungelokubulala udadewabo, umlamu wakhe uMnu Thulani Cele, naye owadutshulwa ngendlela efanayo nekaNkz Xolo ngoNhlangulana (June) kulo nyaka, nengane yomngani wakhe nayo eyadutshulwa yabulawa.
ILANGA lithole ukuthi uNkk Mbhele washonelwa ngumyeni wakhe naye okuvela ukuthi wadutshulwa ngabantu abangaziwa ngo-2009, wabe esebuyela kubo nezingane zakhe.
Emndenini wakhe kuthiwa ubebatshela ukuthi uziphilisa ngemali ayithola njalo ngenyanga emsebenzini womyeni wakhe. ILANGA lithole ukuthi uboshwa nje, ithumba libhotshozwe “yinkabi yakhe, ekhale ngokuthi ibisikhathele ukwenza umsebenzi wokubulala abantu futhi umqashi wayo abuye angayikhokheli kahle uma sekuphume imali.
Kuthiwa inkabi ibhoboke kowesifazane ojwayelene noNkk Mbhele obesekuhlelwe ukuthi abulawe ngoba sekuvuthwe ipholisi yakhe. ILANGA lithole ukuthi ngesikhathi amaphoyisa emshaqa umsolwa kubo, kutholakale inqwaba yamagama abantu asondelene nabo basemdenini wakhe nabanye akhonza nabo, bonke abebakhavile.
Ngesikhathi evele okokuqala enkantolo ngoLwesibili, izinyembezi bezigcwele amehlo, ekhophoza, esaba ngisho ukubuka amalungu omndeni wakhe abekhona enkantolo eyolalela ukuthi uyayithola yini ibheyili.
Amalungu omndeni wakhe akhulume naleli phephandaba enkantolo acele ukuba siwagodle amagama awo athi asathukile namanje ngento athi eyenziwe yinkosazane yakwabo abeyithemba.
“Ubembathe isikhumba semvu, ecashe ngebhantshi lasebandleni. Ubungeke umcabangele ukuthi angenza into efana nale. Sathuka soma uma sithola izindaba zokuthi uyathinteka ekufeni kukadadewethu njengoba besihlale sikhuleka naye ukuthi uMdali aphendule imithandazo yethu, kuboshwe ababulali,” kusho ilungu.
Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthe umsolwa ubhekene namacala amathathu okubulala. Uzobuyela kule nkantolo maduze.
Previous articleLehliselwe esigabeni sokuqala izwe
Next articleUsefuna ukushiya oyifenisha kwiBucs